7 भेनिस बाट सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7भेनिस बाट सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू
तपाईं सबै जान्दछन् रूपमा, भेनिस छ सबैभन्दा विशिष्ट रमणीय शहर युरोप को सबै, यदि छैन दुनिया. इटालियनहरू सम्पूर्ण नहरहरुमा र साना पदहरू बाहिर बनाइएको, सबै जो एक टापुमा झूठ. यो युरोप मा सबै भन्दा सुन्दर ठाउँ मध्ये एक मा शहर बन्द छ. तर हामी सबै जान्दछन् कि. के धेरै थाहा छैन त्यहाँ भेनिस बढी बाहिर छ भन्ने तथ्यलाई छ. यसैले हामी भेनिसबाट सबै भन्दा राम्रो दिन यात्राहरूको एक सूची तयार गर्न चाहन्थ्यौं. तपाईं यी गन्तव्यहरू र पर्यटन को कुनै पनि द्वारा निराश गरिनेछ. त्यसैले, यदि तपाईं रुचि राख्नुहुन्छ केही रोमाञ्चक स्थानहरू भ्रमण मार्फत रेल, Keep पढाइ7भेनिस इटाली देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू!
1. एउटा भेनिस बाट धेरै सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू छ: भियना
भियना को वेनेटो क्षेत्रमा एक जादुई शहर छ, उत्तरी इटाली सबैलाई थाह. उहाँले आफ्नो प्रसिद्ध रोमियो र जूलियट प्ले को स्थान रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दा शेक्सपियर यो अनन्त गरे. आज, शहर अत्यन्तै लोकप्रिय छ, र यो हुन हरेक अधिकार छ.
तपाईं भियना अत्यन्तै सुरम्य पाउनुहुनेछ, र यो एक छ सबै भन्दा राम्रो गन्तव्य भेनिस बाट एक दिन भ्रमण को लागि. तपाईं रेल द्वारा त्यहाँ जान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यो हुन पाउनुहुनेछ सबै भन्दा राम्रो र तेज विकल्प जब भेनिस देखि जाँदै.
इटाली प्रेम गर्नेहरूलाई फ्लोरेन्स यात्रा गर्ने सबै भन्दा राम्रो ठाउँ मध्ये एक छ भनेर थाहा. यो पनि भेनिस बाट पूर्ण दिन यात्रा मा भ्रमण गर्न सबै भन्दा राम्रो गन्तव्य मध्ये एक छ.
धेरै मानिसहरू बिर्सेर अन्त यसलाई अलिकति थप दूर छ किनभने तिनीहरूले भेनिस बाट यो बढ्न सक्ने. तथापि, तपाईं केवल दुई घण्टामा भेनिस बाट फ्लोरेन्स पुग्न सक्दैन एक उच्च गतिको रेल चढेर. त्यो बाटो, तपाईं पनि धेरै हेर्न प्राप्त हुनेछ आश्चर्यजनक परिदृश्य भेनिस र फ्लोरेन्स बीच भूमि मार्फत छरिएका.
तपाईं फ्लोरेन्स अनुभव प्राप्त हुनेछ मुख्य कुरा आकर्षक सडकमा छन् र विश्व-प्रसिद्ध फ्लोरेन्स गिरजाघर वा Duomo फिरंज के. जब तपाईं विचार, फ्लोरेन्स सबै यात्री को लागि एक आकर्षक गन्तव्य बन्नेछ.
3. एउटा भेनिस बाट धेरै सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू: Padua
सबैले Padua बारेमा थाह (इटालियन: प्याडोभा), तर यो अझै पनि भेनिस बाट शीर्ष दिन यात्राको एक लागि गन्तव्य हो. शहर ठूलो इटालियन शहर आवश्यक सबै कुरा छ किनभने छ. हामी स्वाभाविक ठूलो खाद्य बारेमा कुरा गर्दै छन्, आश्चर्यजनक वास्तुकला, र अद्भुत piazzas.
Padua गर्न भेनिस देखि जा सर्वश्रेष्ठ हासिल छ मार्फत रेल सवारी इटाली केही आश्चर्यजनक ठाउँ मार्फत जान्छ रूपमा. प्लस, यो पनि सबैभन्दा सहज र तेज विकल्प उपलब्ध छ.
जब तपाईं Padua प्राप्त, पक्का प्राटो डेला Valle शहर को केन्द्र भ्रमण बनाउन. यो शहर को मुख्य वर्गहरूको छ, र यो एक बेवास्ता गर्न सक्दैनन् भव्य मूर्तिहरू भरिएको छ.
भेनिस Padua गाडिहरु गर्न
4. ताल Garda
ताल Garda छ इटाली सबै भन्दा ठूलो ताल. यो पनि सबै भन्दा प्रसिद्ध मध्ये एक छ. र यो हुन हर कारण छ. ताल द्वारा सबै सौन्दर्य प्रकृति घेरिएको छ प्रदान गर्न सक्छन्. तपाईं magnolias पाउनुहुनेछ, cypresses, कागति रूखहरू, जैतून रूखहरू, पहाड डोलोमाइट र यति लेक Garda वरिपरि धेरै.
तपाईं भेनिस बाट ताल को किनारा मा धेरै सहर पुग्न सक्दैन. तथापि, हामी लेक Garda उत्तम दिन भेनिस बाट यात्राको दुई Peschiera र Sirmione को सहर समावेश गर्न आवश्यक छ भन्ने महसुस. यो र पोखरी Garda पुग्न, तपाईं को एक लाग्न सक्छ धेरै रेल कि बिदा हरेक दिन भेनिस.
5. एउटा भेनिस बाट धेरै सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू: सिएना
सबैले सिएना बारेमा थाह, तर यो तपाईं मिस गर्न चाहनुहुन्छ एक शहर हो. यो टस्क्यानी को jewel र सबैभन्दा विशिष्ट भव्य छ मध्ययुगीन शहर के तपाईं कहिल्यै हेर्न प्राप्त हुनेछ.
शहर सानो छ, तर यसको लागि प्रसिद्ध छ यसको cobbled सडकमा र भव्य मुख्य Piazza डेल Campo रूपमा चिनिने वर्ग. पनि, यस उल्लेखनीय Magnia टावर त्यही वर्ग मा खडा, र यो तपाईं सिएना हेर्न हुनेछ ऊंची संरचना छ.
को रेल सवारी शहर टाढा छ रूपमा बिट लामो छ. तथापि, पछि सिएना सानो छ, तपाईं त्यहाँ जाने निर्णय भने तपाईं अझै पनि भेनिस एउटा अचम्मको दिन यात्रा हुन सक्छ.
भेनिस सिएना गाडिहरु गर्न
6. सान Gimignano
सिएना टस्क्यानी मा मात्र भव्य शहर छैन. सान Gimignano अर्को एउटा छ. ती दुवै छन् यूनेस्को विश्व विरासत साइटहरु, तर केवल San Gimignano यसको क्षितिज धेरै मध्ययुगीन टावर बनेको तपाईंलाई तर्साउन सक्छ. यो साँच्चै हेर्न दृष्टि र तपाईं भूल छैन छ.
स्वाभाविक, तपाईं शहर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ मार्फत रेल यो भेनिस बाट साइट पुग्न सजिलो र तेज तरिका हो रूपमा. के थप छ, तपाईं पनि आधुनिक को आराम देखि माथि उल्लेख towering क्षितिज हेर्न प्राप्त हुनेछ इटालियन रेल.
भेनिस San Gimignano गाडिहरु गर्न
ट्रियस्टे स्लोभेनिया संग सिमाना मा Friuli Venezia Giulia क्षेत्र र झूट को राजधानी छ. यसलाई इटाली को सबै एक अद्वितीय स्थिति छ र को लागि देश को भाग भएको छ बल्लतल्ल 70 वर्ष. यस कारण, ट्रियस्टे धेरै युरोपेली प्रभाव को एक अद्वितीय मिश्रण छ.
तथापि, मिश्रण के यो विशेष र एक अद्भुत बनाउँछ छ कि यात्रा गर्न स्थान. तपाईं शहर सजिलै पुग्न सक्छ भेनिस बाट रेल मार्फत. सारा सवारी धेरै छोटो छ, तर महत्त्वपूर्ण भाग यो सुन्दर इटालियन तट traverses छ. कि सबै निश्चित यसलाई भेनिस तपाईंको दिन यात्राको एक लागि एक उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउँछ.
भेनिस ट्रियस्टे गाडिहरु गर्न
रोम ट्रियस्टे गाडिहरु गर्न
मिलान ट्रियस्टे गाडिहरु गर्न
फ्लोरेन्स ट्रियस्टे गाडिहरु गर्न
प्रमुख Takeaways बारे भेनिस बाट सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू
समग्रमा, भेनिस एक अद्वितीय स्थिति मा निहित छ. तपाईं धेरै इटाली को धेरै मार्फत रोचक सजिलो संग गन्तव्यहरू यात्रा प्राप्त. प्लस, त्यही स्थान भेनिस र धेरै यी दिन यात्राको को लागि अनुमति दिन्छ.
तपाईंले यी रोमांचक एक सुरू गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, सबै तपाईं आफ्नो मनपर्ने गन्तव्य छनोट छ के गर्न आवश्यक. त्यसपछि सबै बाँकी छ भनेर तपाईं के गर्न लागि हो रेल स्टेशन जाने छ. तपाईं कुनै पनि अतिरिक्त प्रश्न छ भने, सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र महसुस एक ट्रेन सेव, र हामी सहयोग गर्न खुसी हुनेछन्.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “7 भेनिस इटाली देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-venice%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel GardaLake Padua trainjourney ट्रैवलफ्लोरेन्स यात्रा ट्रियस्टे भियना